hadimo jacayl part 1 | www.saaxil.tk
Real Madrid Oo Ka Aarsatay FC Girona, Cristiano Ronaldo Oo AFAR Gool Dhaliyay, Christian Stuani Oo Laba Ugu Jawaabay Iyo Los Blancos Oo 4 Dhicbood U Soo Jirsatay Atletico.
Iska ilow Neymar, Messi, Ronaldo & Cid La Mid Ah: Daawo Caawintii Mucjisada Ahayd Ee Uu Angel Di Maria U Dhiibay Mbappe
Andriy Shevchenko Oo Ahaa Shaqsigii Isku Aadkii Champions League-ga Sameeyay Oo Ka Hadlay Hal Sabab Oo Ay Barca Koobkan Ugu Guulaysan Karto.
Rajadii Koobka La Liga Ee Atletico Madrid Oo Murugo Isku Badashay, Villarreal Oo Si Wayn U Caawisay Barcelona Iyo Kooxda Valverde Oo 11 Dhibcood Hogaanka Ku Qabtay.
RASMI: Isku Aadka Afar Dhamaadka Tartanka Emirates FA Cupka Oo La Sameeyay Iyo Sida Loo Wada Ciyaari Doono.
hadimo jacayl part 1
waa habayntii iyo fikirkii abdi samed baashe hussein
Waa sheekho aad u xiiso badan oo ka waramaysa dhib, rafaad, iyo hadimooyinka ay dadka dibada ka yimadaa ku hayaan dhalinyarada is jecel ee dalka iyo siday ugu nugul yihiin waalidku dadka dibada ka yimaada ee aan loo tix galin jacaylka wiilka iyo gabadha iyo guusha uu ku danbeeyo jacaylka runta ahi.
Sheekadani waxa ay ka hadlaysaa wanaaga jacaylka marka labada qof raali isku yihiin, sida waalidku u ixtiraamin jacaylka hablaha ee loogu qasbo nin aanay garanayn oo lagu siinayo dibada ayuu ka yimid ama waa nin lacag leh ee aan loo meel dayin mustaqbalka inanta, kuna kalifaysa wiilka ay is jeclayeen inuu dalkii iskaga tago oo uu bada u galo si isna bari loo yidhaa dibada ayuu ka yimid oo waa lacagle.
Waa sheeko aad ka dhehan karto qoraal xeel dheer oo u socota, iskuguna daba xidhidhsan sidii filim oo kale, ayna tafatireen qoraayada soomalida kuwooda ugu caansani, kuna dhehan tahay jacayl iyo murti badani, waxanay ku bilaabantay sidan:
Waxay ahayd goor casar gaaban ah abaaro 5:00-tii galabnimo, cadceeduna sii dhacayso, dhulkuna uu helay roob shuux ah, dhirtuna u badan tahay akhtar, ka dharagtay roobkii guga, dadkuna wada quruxbadan yihiin, aad moodidna inay jawiga wanagsan iyo dadku is heleen.
Waxa magaalada hargeisa ka caan ah in ay galabtii dhalinyaradu u soo dhaadhacaan suuqa. Mustafena waxa uu kala mid yahay dhalinyarada magaalada uu soo kacay, maydhay, labisna kiisii ugu qurx badnaa soo xidhay. Waxa uu soo dhaqaaqay goobtii uu ka raaci lahaa buska, goobta oo aad u dad badan, dadka xaafadduna ay inta badan ka racaan baska. Cabaar marki uu soo socday waxa uu soo gadhay goobtii buska. Basaska oo buuxa ayaa u sahlay in dhalinyaro iyo wayeel ay isku soo gaadhaan. Markii uu in door ah tagnaa ayaa waxa uu isha la helay gabadh Eebe qurux u dhameyay, maariin xigta, dhubnayn aan burnayna, gaabnayn aan dherayna, habka labiskeeduna aad u qurux badan yahay. Waa labis isku eeg oo basali iftimaya ah, wali kama uu jeedsan Maryan.
Lakiin Maryan ayaa dareentay oo yara dhaqaaq joogsatay. Mustafe wali wuu ku maqan yahay oo waxa uu jecel yahay in ay is bartaan, waayo waxa uu ogyahay in aanay magaalada cidna iska garanayn oo uu dhawaan ka yimid magaalada burco. Waxa ay in doo ah sugayeen buska, jeclaana inuu barto inanta, laakiin wuu ku dhiran wayay inuu lahadlo. Waxa yimid baskii, Maryana raacday, kana buuxsamay Mustafe sababtoo ah dadka oo dumar u badnaa awgii.
Mustafe aad ayuu uga niyad jabay in iyaga oon is baran halkaa ku kala tagaan, baskiii labad ayuu iska raacay isaga oo niyad jabsan, hawshii suuqa uu u tagay oo ahayd inuu abtigii la kulmona soo dhamaysay, isla markiiba wuu isa soo rogay oo xafadii ayuu ku soo noqday. Ma uu baydhbaydhin ee waxa uu toos u galay qolkiisii. Markii uu sariirtii ku jiifsadayna waxa maskaxdiisa ka dhexguuxayay kuna sawirnaa gabadhii uu manta soo arkay. Mustafe daqiiqado yar ayuu isku badalay kun noqday qof jacayl la il daran, dareenkiisii iyo ruuxdisii oo dhanina raacaday maryan.
“Balan maaha jacaylku bandhig lay isugu baaqee waa ishaa biligtaada wax bogaaga ku beerma”
Isagoo sidii ah ayuu waaagii u barayay.
Mustafe waxa uu dhigtaa iskulka faarax oomar markii uu u bohoolay jihadii iskuulku ka xigay ayuu goobtii safka iskuulka lagu galayay ku arkay gabadhii uu shalay arkay. Mustafe arin kaga sii daran intii hore oo waxa uu baahi wayn u qabaa inuu helo cid uu lawadaago jacaylkan ku kaliyaysatay.
Markii uu arkay iyana garatay inuu inankii shalay yahay indhahooduna si toos ah ayay iskugu dhaceen.
Maryan waa fasalka kowaad ee dugsiga sare, Mustafena laba class ayuu ka sareeyaa oo waa ka saddexaad.
Malintaas markiii uu galay fasalka waxa uu bilaabamay warwar iyo fakir aad u xeeldheer oo ku salaysan jacayl uu Marayan u qaaday ee cidna aanay u ogayn. Waxa uu ku tirabayay erayo jacayl ah,
dahab lagu masaalaay
dawadii naftaydaay darayeel naftan
dareenkaga mooye mid kale maya
Malintaas oo dhan muu dhigan iskuul ee waxa dhamaan jidhkiisa iyo maskaxdiisaba saaqay jacayl ku kaliyaystay, kuna hamiyay inay mar uun is calman donaan.
Markiii uu xafadii tagay qadeyay ,ayaa hadana uu halkii ka bilaabay lakiin imika waxa uu ku fikirayaa sidii uu ku heli lahaa maryan ama meel uu kala xidhidho ,meel dheerna ka ma u donan ee waxa uu la xidhidhay inan ay saxiib yiiin oo layidhaa Faysal oo ay iskulkana isku class yihiin xafadana wada dagan yihiin.
Faysal waa wiil aad u furfuran oo dhamaan dhalinyarada xaafadana ay is yaqanan wiilal iyo gabdhaba. Markii uu iskuulkii uu soo baxay ayay Faysal dariiqa ku kulmeen, laysna salaam. Kadib in door ah markii ay kala amusnayeen ayuu Mustafe calool adaygay, kuna dhiiraday inu waydiiyo wax cinwaan ah haduu ka hayo Maryan madama uu isagu uga war roon yahay. Faysalna u balan qaaday inuu siin doono marka la rawaxaayo, kana cudur daaratay inaanu imika hayn. Mustafe waxa gashay yididiilo inuuu helayo Maryan. Helayana cid la wadaagta jacaylka ku kaliyaystay.
Rawaxaadii goor ay tahay ayuu Mustafe soo hor is taagay iskuulka oo uu deg deg uga soo baxay sii uu Faysal u arko marka uu soo baxo, se waxa uu arkay Maryan oo ku dhex jirta hablo badan, lays eeg laysna garay lakiin wax wada hadal ahi majiraan. Inyar kadib ayuu soo baxay Faysal. Waxa ay wada qaadeen dariiqa dheer ee loo maro xafadooda. Kaftan badan iyo sheeko aad u macaan oo ay wada wateen ayaa waxa ay soo gaadheen xafadahoodii. Markii ay sii kala hadhayeen ayuu Faysal mustafe ku yidhi, “Saxiib waxaad iga sugaysay numbarkii Maryan”.
Musfana ugu jawaabay, “Haa”
Faysal, “Saxiib, waa kan namberka Maryan ee qoro!”
Musfafa, “Wayahay, 211 34 89. Waad mahadsan tahay. Waxa aan abaalakaaga kuugu gudana garan mayo”.
Faysal, “Maya saxiib, intaas iyo in ka badan ba waa lay isku leeyahay”.
Musfafa, “Waayahay saaxiib ee jaaw. Waa inoo bari inshaa Allah”.
Farxad aan wayadaa lagu arag ayaad ka dhehan karaysay wajigiisa Mustafe. Waxa aana uu la dhacasnaa sida yar ee uu ku soo helay numberka Maryan – Ileen qof ay wax ka awood wayni wataan meel walba wuu la galaye – iyo sidii uu u samray inuu heli doono.
Kadib markii uu gurigii tagay ee uu qadeeyay isagoo faraxsan, aad moodidna gabadhuu u bahnaa inay is heleen ayuu waxa uu tagay sarirtisii. Waxa uu bilaabay fikir sidii uu ula xidhidhii lahaa iyo sidii uu iskugu sheegi lahaa. Akhirkiina waxa uu go’aansaday in uu u qoro “sms” fariin, kuna sheegto bahidiisa. Waxa uu qoray fariintii oo u aad uga shaqeeyay, kuna sheeganaayo jacaylkiisa, kana codsaday inay la qabato ee aanay ku diidin.
Markii uu diray fariintii waxa maskaxdiisa ka bixi wayday bilaa ay la socotaa qof kale, amaba aaanay adiga kugu qanacsanayn. Waxa uu fikiraba, waxa uu habeenkaas seexday isagoo aad modid inay ku tidhi kuma rabo amaba kula ma qaban karayo jacaylkan.
Marayan waxa ay heshay fariintii uga timid Mustafe, garatay markay akhriday cida uu yahay, wiilka u soo qoray fariintan. Lakiin aanay u lahayn aqoon durugsan wiilkan soo calmaday. Fikir dheer dabadii waxay nafteeda ku qancisay inay fariin u qorto ay ugu jawaabayso.
Walal waan ku salaamay waanan helay fariintaad ii soo dirtay, u jedadeedina waan fahamay, lakiin adoon walaal wax kale u qadanayn aan ka soo fikiro, malinta arabacadana aan kuugu soo war celiyo, ok bye.
La socod qaybta 2-aad
by abdi samed baashe xuseen
Categories: jacaylka . Tags:sayidka . Author: cabdi samed baashe
Comment by Hibo on December 24, 2011 6:33 AM
Comment by mukhtaar cabdi sheekh bulshaawi on May 2, 2012 12:33 PM
saxib salan kadib inaad sheekadan oo aan anigu qoray aad isku qorto waa laga haboona walhi, hanti qof kale leyahay oo maskaxdiisa ka soo maxatay inaad isticmaasha maaha waxa muhiim ah, xataa hadaad i waydiisan lahayd waan ku hibayn lahaa wlhi
gabadha aduunka ugu dheer Parafiyum-ka aad ku soo jiidan karto wiilka aad rabtid in aad guurasto
Sheeko Qosol iyo Xikmad Xambaarsan
ayaan daran Qaybtii labaad
sheeko qosol iyo xiiso leh